၃။ သင်သည်အဘယ်ကြောင့်စွဲစွဲစွဲလမ်းနေရသည့်ရိုးရိုးသားသားရိုးသားသည့်အကြောင်းရင်းများ - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်
ဒါက Wakeup ခေါ်ဆိုခဖြစ်ပြီး, Wakeup ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု '' ကောင်းတဲ့ '' ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ကြသည်မဟုတ်။
1 ။ တာဝန်ယူမှု။
သူတို့က porn သွေးဆောင် ED သို့မဟုတ် performance ကိုစိုးရိမ်ပူပန်ကျော်လွှားချင်တယ်။
များသောအားဖြင့်အီးမေးလ်၏ပထမစာပိုဒ်ကိုဖတ်ရုံနှင့်လူတစ် ဦး သည်သူ၏ပြissueနာကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက်ဘာရှိသလဲဆိုတာကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သေချာပေါက်ပြောနိုင်သည်။
အကြမ်းဖျင်း 60 ငါကဏ္ဍကဆြုံးရသောအီးမေးလ်များ% သို့မဟုတ်အဘယ်အရာကိုငါမခေါ်လိမ့်မယ် မင်ျဂလာ-ဖြစ်ပါတယ်-ငါ့ကိုတိုင်ကြား.
အဆိုပါအလေးသာသူ့ကိုဆန့်ကျင် stacked နေကြသည်။ မတရားဘူး။
သူသည်ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့်သူ့အတွက် 'ပို၍ ခက်ခဲလိမ့်မည်' ဖြစ်သည်။
သူကသူ့လက်ပ်တော့ပ်ကိုအမြဲတမ်းကျောင်းမှာသုံးဖို့လိုတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်အလုပ်အတွက်အစီရင်ခံစာတွေရေးဖို့လိုတယ်။ ဒါကြောင့်အင်တာနက် (နှင့်သွေးဆောင်မှု) နဲ့ဝေးဝေးနေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။
သူသည် 'ဆွဲဆောင်မှုမရှိ' နှင့် 'မိန်းကလေးများနှင့်ဆိုးရွား' သည်၊ ထို့ကြောင့်သူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်စီမံနိုင်လျှင်ပင်သူသည်ဘယ်တော့မှမိန်းကလေးရနိုင်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်းသူသိထားသည်။
မိမိကိုယ်ကိုသားကောင်အဖြစ်မြင်ခြင်းအားဖြင့်သူသည်မိမိ၏တာ ၀ န်ဖြစ်သောမိမိ၏ပြproblemsနာများမှထွက်ခွာရန်မိမိ၏အစွမ်းတန်ခိုးအားမိမိ၏အခြေအနေများသို့လွှဲပြောင်းပေးသည်။
ဒီကောင်လေး၏နောက်ထပ်ဘုံဝိသေသသူတစ်ဦးလွယ်ကူသောလမ်းထွက်ချင်သောဖြစ်၏ သူတစ်စုံတစ်ဦးကသူ့ကို '' fix 'ရန်လိုသည်။
ဒီကောင်လေးရဲ့အီးမေးလ်ကဒီလိုပြောနိုင်တယ် -“ ဒါဆိုငါ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အခြေအနေ (အခြားထောင်ပေါင်းများစွာသောယောက်ျားတွေနဲ့ဆင်တူတယ်) - ငါဘာလုပ်သင့်သလဲ” ထိုအခါငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုရေးသားခြင်းမှရပ်တန့်ရန်ရှိသည်: "ကောင်းပြီ, သင်ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်။ ငါ့ website တွင်ဆောင်းပါးငါးခုကိုဖတ်ပြီလော မင်းအဲဒီမှာစလုပ်သင့်လား။
အဆိုပါအရာ porn စွဲကျော်လွှားရန်အစစ်အမှန်လမ်းရိုးရှင်းဖြစ်ပါတယ်။
လူအပေါင်းတို့သည်လည်းအောင်မြင်သောယောက်ျားတွေဘုံထဲမှာရှိသည်သောတဦးတည်းအရာသူတို့ပထမဦးဆုံး 100% တာဝန်ယူသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ငါကိုယ်တိုင်:“ ငါဒီအခြေအနေကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိုးဖောက်လာသူဖြစ်တယ်။ ဒီညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှု၊ ညစ်ညမ်းမှုနဲ့သွေးဆောင်မှု ED နဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုကငါ့ရဲ့ပြproblemနာပါ။ ငါကိုယ်တိုင်လည်းထွက်ခွာသွားတော့မယ်။ ”
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်နှင့်သင်၏ Brain On Porn, Porn Enlightenment နှင့်အခြားသူများကဲ့သို့သောအချက်အလက်များအားလုံးသည်ထိုတွင်ရှိသည်။
သငျသညျတာဝန် ယူ. , အိုင်တီအချက်များအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အဘယ်သူ၏အရေးအသားဤဆောင်းပါးကိုမှုတ်သွင်းခွန်အားနည်းပြတေလာ, ကနေဒီကိုးကား, သေသပ်စွာပြုလုပ်ဖော်ပြလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်:
တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦး leaner ကောင်ဘို့မိမိတို့ရှာပုံတော်အောင်မြင်ပါလိမ့်မည်ဆိုပါက "မျှသာနှစ်မိနစ်၌ငါသင်ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ထိုအနှစ်မိနစ်လုံခြုံဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်း 30 စက္ကန့်ဖို့ဖြစ်ကောင်းပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကား, အဆီဆုံးရှုံးမှုဒါပေမယ့်လည်းသင်၏ကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏ကျန်ဖို့မယ့်သက်ဆိုင်ပါသည်။
သင်ကိုယ်တိုင်အပြစ်တင်လျှင် - အောင်မြင်မှု။ အဘယ်သူမျှမအောင်မြင်မှု - သင်အရာအားလုံးကိုအပြစ်တင်လျှင်။ ကာလ။ "
- နည်းပြတေလာ၊ strenghtcoachtaylor.ca
ယောက်ျားတွေပြောတာက“ ဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့သုံးပတ်ကကျွန်တော်ပြန်လုပ်ခဲ့တာ ၅ ကြိမ်မြောက်ပဲ”
ကြင်ဖော်မဲ့အပတ်တစ်ခုတည်းမသွားနိုင်ဘူးလား။ တကယ်လား ??
သငျသညျ Are အစပျိုးခြင်းရှောင်ရှား?
ဘယ်တော့မှပုံမှန်အားဖြင့်ပြန်ဖြစ်တာလဲ၊ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ။ မင်းလက်မလျှော့ခင်မှာမင်းဘာခံစားရသလဲ
ငါက sugarcoat သွားဘူး: အတော်လေး porn ဖြစ်ပါသည် မယုံနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲ အများအပြားယောက်ျားတွေများအတွက်, ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်းပါဝင်သည်။
သို့သော် အကယ်. သင်ဤဆင်းရဲဒုက္ခကိုတဆင့်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လူတစ်ဦးကကပ်နှင့်သင့်အသက်တာကိုဖွင့်သန့်ရှင်းရေးအတှကျအသငျသညျကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ်။
"ဘဝကမမျှတဘူး။ ဘဝကခက်ခဲသည်။ သင်ကထဲသို့သွင်းထားဘာကြောင့်ထွက်ရလိမ့်မယ်။
သငျသညျကိုမှန်ကန်အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါသင်တစ်ဦးခြားနားချက်စေရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ဦးကတိကဝတ်လုပ်သောအခါ, သင်အိုင်တီ သာ. ကောင်း၏ချောင်းကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ "
3 ။ သင့်အနေဖြင့်လိုအပ်သောအလုပ်အတွက်ချပြီးခြင်းမရှိဘဲ, ချက်ချင်းရလဒ်များကိုချင်တယ်။
"ဘယ်လောက်ကြာငါ၏အ reboot ယူကြမည်နည်း"
စေ့စေ့စပ်စပ်ရေးသားနေသော်လည်း ဒီအပေါ်ဆောင်းပါးဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ညစ်ညမ်းသမိုင်း, အသက်အရွယ်နှင့်မဟာဗျူဟာအပါအဝင်အများအပြားအချက်များပေါ်တွင်မူတည်ကြောင်းရှင်းပြ, ဒီအရေအတွက်ကတဦးတည်းမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။
သူတို့ကအခုအချိန်မှာ '' နောက်တဖန်ပုံမှန်ဖြစ် 'နှင့်နာကျင်မှုများနှင့်ဆငျးရဲဒုက်ခမဆိုမပါဘဲချင်တယ်။
သူတို့ကမှော်ကျည်ဆန်တစ်ခုလိုချင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် Viagra နှင့် cialis Multi-ဒေါ်လာဘီလီယံမူးယစ်ဆေးဝါးများဖြစ်ကြသည်။
ငါအရေးတကြီးနားလည်ပါတယ်။ သို့သော်တစ်ဦး reboot အချိန်ယူပြုလုပ်မယ့် ကြိုးစားအားထုတ်မှု.
ပိုကောင်းယေဘုယျအားဖြင့်နေ့ချင်းညချင်းဖြစ်ပျက်ပါဘူးအဘို့သင့်ဘဝပြောင်းခြင်း။ ဒါဟာနှင့်တကွကြွလာ သေးငယ် incremental အပြောင်းအလဲများနှင့်သင့်ပြဿနာအချက်များရန်သင့်မဟာဗျူဟာကပြွီး။
လေးနက် PIED ထံမှတစ်ဦးက reboot အချိန်ကြာနိုင်ပါတယ်, ရေတိုဘက်မှာရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကနေလပေါင်းအတော်ကြာမှ။
So. သင်ကိုယ်တိုင်ကတိကဝတ်ပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။ အပြောင်းအလဲများလုပ်ရန်မှုတ်သွင်း Feeling?
သင်ဤ post ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်, သင်ကဒီမှာငါ့အကိုအခြားအရေးအသားကိုရှာဖွေနိုင်သည် http://rebootblueprint.com/